Isitolo seGoogle Play singeza okokuhlunga okusha kohlelo lokusebenza - iGamesNews
I-Google inempahla ebaluleke kunazo zonke ku-Google Play Isitolo ukwenza abasebenzisi bangafuni ukushintsha i-ecosystem yabo. Akuseyona ndaba yokuthi ususe ku-Android uye kwi-iOS, kepha futhi ungenzi lokho kungene isiphakamiso esinjengaleso uHuawei akha.
Ukuze wenze lokhu, zama ukuguqula isipiliyoni ku-Google Play Isitolo sibe yinto esingenayo kwamanye amapulatifomu.
Enye yezinto ezintsha zalolu hlelo lokusebenza nesitolo segeyimu isihlungi sosesho esithuthukisiwe, ngokuvuselela amaseva enkampani.
Imibandela yokuhlunga engaphezulu ku-Google Play Isitolo
Ezinyangeni ezimbalwa, lapho sesha okuthile esitolo sezinhlelo zokusebenza, sabona ukuthi amagama athile wokuhlunga avela phezulu. Isibonelo, uma sifuna imidlalo, enye yezinketho "ngaphandle kwe-inthanethi", ukuze sikwazi ukubona izihloko kuphela ezingadingi ukuxhumana kunethiwekhi.
Manje lokhu kuhlunga kuyathuthuka ngokufakwa kwamapharamitha amasha, njenge amaphuzu wabo, Ukukhetha enziwe abahleli beGoogle noma isikhathi abesesitolo, bekwazi ukusesha kuphela i okusha.
Ngale ndlela singasesha imidlalo emihle kakhulu nokusetshenziswa kwengqikimba ngayinye, esiza ukuhamba phakathi kwamashumi ezinkulungwane zeziphakamiso ezise esitolo sezinhlelo zokusebenza.
Ukuhlunga kathathu kungasetjenziswa ngasikhathi sinye, futhi uma sifuna ukuhlehlisa ukukhetha kufanele sichofoze i-X ebonakala endaweni yangakwesokunxele yomugqa lapho izihlungi zizoqala khona ukusesha futhi.
Lesi sici esisha siqala ukufinyelela kubasebenzisi abaningi, kepha isibuyekezo sesitolo esincika kumaseva we-Google, ngakho-ke kungathatha izinsuku ezimbalwa ukusibona kuwo wonke amadivayisi.
Tags:Isitolo kohlelo lokusebenza okokuhlunga okusha Play seGoogle singeza